Nyatsobatsirwa Nokuverenga Bhaibheri | Yokudzidza
“Ndinofarira mutemo waMwari.”—VAR. 7:22.
TSVAGA PFUNGWA IDZI
Kuverenga “nenzwi riri pasi” kuchakubatsira sei?
Ungava sei nepfungwa dzinobva muMagwaro dzaunogona kushandisa kubatsira vamwe?
Kunyatsoverenga Bhaibheri kunokudzivirira sei?
1-3. Kuverenga Bhaibheri uye kushandisa zvarinodzidzisa kunobatsirei?
“MANGWANANI ega ega ndinotenda Jehovha nokundibatsira kunzwisisa Bhaibheri.” Hanzvadzi yechikuru yakataura izvozvo yakaverenga Bhaibheri rose kanopfuura ka40 uye haisi kugumira ipapo. Imwe hanzvadzi yechiduku yakanyora kuti kuverenga Bhaibheri kwakaibatsira kunyatsoona kuti zvechokwadi Jehovha ariko. Izvi zvakaiswededza pedyo naBaba vayo vokudenga. Yakati, “Handina kumbofara zvakadai muupenyu hwangu!”
2 Muapostora Petro akakurudzira vose kuti vapange “mukaka usina kushatiswa weshoko.” (1 Pet. 2:2) Vaya vanogutsa chido ichocho nokudzidza Bhaibheri uye vanoshandisa zvarinodzidzisa vane hana yakachena uye chinangwa muupenyu. Vanoumba ushamwari hwenguva refu nevaya vanodawo uye vanoshumira Mwari wechokwadi. Zvose izvi zvikonzero zvakanaka zvokuti tifarire “mutemo waMwari.” (VaR. 7:22) Asi pane zvimwe zvakawanda. Zvimwe zvacho ndezvipi?
3 Kana ukadzidza zvakawanda nezvaJehovha neMwanakomana wake, uchawedzerawo kuvada uye kuda vamwe vanhu. Kuva nezivo yakarurama yeMagwaro kunokubatsira kuona kuponeswa kuchaitwa vanhu vanoteerera pachaparadzwa nyika ino. Une mashoko akanaka okuudza vanhu muushumiri. Jehovha achakukomborera paunenge uchidzidzisa vamwe zvinhu zvawakadzidza pawaiverenga Shoko rake.
VERENGA UYE FUNGISISA
4. Kuverenga Bhaibheri “nenzwi riri pasi” kunorevei?
4 Jehovha haadi kuti vashumiri vake vangoita chipatapata kuverenga Shoko rake. Kare akaudza Joshua kuti: “Bhuku iri romutemo harifaniri kubva pamuromo pako, unofanira kuriverenga nenzwi riri pasi masikati nousiku.” (Josh. 1:8; Pis. 1:2) Murayiro uyu unoreva here kuti unofanira kuverenga mashoko ose nenzwi riri pasi kubva kuna Genesisi kusvika kuna Zvakazarurwa? Kwete. Unoreva kuti unofanira kuverenga uchizvipa nguva yokufungisisa. Paunoverenga Bhaibheri “nenzwi riri pasi,” uchakwanisa kuisa pfungwa pazvikamu zvinonyanya kukubatsira uye kukukurudzira panguva iyoyo. Paunowana mashoko, ndima kana nyaya dzakadaro, verenga zvishoma nezvishoma, uchitoita seuri kududza mashoko acho. Kunyatsokosha kwepfungwa yeMagwaro kungakubaya mwoyo. Nei izvi zvichikosha? Nokuti kunzwisisa zano raMwari kunokupa chikonzero chakasimba chokurishandisa.
5-7. Taura muenzaniso unoratidza kuti kuverenga Shoko raMwari nenzwi riri pasi kungakubatsira sei (a) kuramba uine tsika dzakachena; (b) kuitira vamwe mwoyo murefu uye mutsa; (c) kuvimba naJehovha kunyange munguva dzakaoma.
5 Kuverenga nenzwi riri pasi kunobatsira paunoverenga mabhuku eBhaibheri ausina kujaira. Somuenzaniso, funga zviitiko izvi zvitatu. Kutanga, funga nezvehama yechiduku yasvika kuuprofita hwaHosiya pakuverenga kwayo Bhaibheri. Muchitsauko 4, inombomira yapedza kuverenga nenzwi riri pasi ndima 11 kusvika ku13. (Verenga Hosiya 4:11-13.) Nei yamira? Yabatwa pfungwa nendima idzodzo nokuti yave ichirwisa kusaita unzenza kuchikoro. Inodzamisa pfungwa pandima dzacho yofunga kuti: ‘Jehovha anoona zvinhu zvakaipa zvinoitwa nevanhu pachivande. Handidi kumugumbura.’ Hama yacho inotsidza mumwoyo kuramba iine tsika dzakachena pamberi paMwari.
6 Muchiitiko chechipiri, hanzvadzi iri kuverenga uprofita hwaJoeri uye inosvika pachitsauko 2, ndima 13. (Verenga Joeri 2:13.) Sezvainoverenga ndima iyoyo nenzwi riri pasi, inofungisisa kuti ingatevedzera sei Jehovha, “ane nyasha nengoni, anononoka kutsamwa, azere nomutsa worudo.” Inosarudza kuti ichaedza kusataura mashoko okunyomba uye ehasha kumurume wayo nevamwe.
7 Chechitatu, fungidzira muKristu apererwa nebasa uye ari kunetseka kuti achariritira sei mudzimai nevana. Pana Nahumi 1:7, anoverenga nenzwi riri pasi kuti Jehovha “anoziva vaya vanopotera kwaari” uye anovadzivirira se“nhare muzuva rokutambudzika.” Pfungwa iyoyo inomunyaradza. Anoona kuti Jehovha anotitarisira uye ane rudo, obva arega kunyanya kuzvidya mwoyo. Anoverengawo ndima 15 nenzwi riri pasi. (Verenga Nahumi 1:15.) Hama yedu inoona kuti nokuparidza mashoko akanaka munguva dzakaoma, inenge ichiratidza kuti zvechokwadi, inoona Jehovha senhare yayo. Hama yacho painenge ichitsvaka basa, inonzwawo chido chokutsigira ushumiri hwepakati pevhiki.
8. Taura muchidimbu chokwadi chinokosha chawakawana pawaiverenga Bhaibheri.
8 Pfungwa dzinobatsira dzataurwa dzinobva mumabhuku eBhaibheri anonzi nevamwe akaoma kunzwisisa. Paunoongorora bhuku raHosiya, raJoeri, uye raNahumi nechido chokudzidza, zvakanaka kuti uverenge dzimwe ndima dzirimo nenzwi riri pasi. Funga uchenjeri uye nyaradzo zvaunogona kuwana mumabhuku iwayo evaprofita! Asi zvakadini neBhaibheri rose? Shoko raMwari rakaita somugodhi wedhayamondi. Nyatsochera mugodhi iwoyo! Verenga Bhaibheri rose nechinangwa chokuwana mirayiridzo nevimbiso zvinokosha zvinobva kuna Mwari.
VAVARIRA KUTI UNZWISISE
9. Tingawedzera sei kunzwisisa kwatinoita kuda kwaMwari?
9 Kunyange zvazvo zvichikosha kuti uverenge chikamu cheBhaibheri zuva rega rega, unofanirawo kuedza kuchinzwisisa. Saka, shandisa zvakanaka mabhuku esangano raJehovha kutsvakurudza zvimwe zvine chokuita nevanhu, nzvimbo, uye zviitiko zvaunoverenga nezvazvo. Kana uchinetsekawo kuti imwe dzidziso yeBhaibheri inoshanda sei muupenyu hwako, unogona kukumbira kubatsirwa nemukuru weungano kana mumwe muKristu akasimba pakunamata. Kuti tiratidze kukosha kwokuramba tichiwedzera kunzwisisa, ngatikurukurei muenzaniso wemumwe muKristu wepakutanga akaedza kuita izvozvo. MuKristu iyeye ainzi Aporo.
10, 11. (a) Aporo akabatsirwa sei kunatsiridza kuti ave mushumiri wemashoko akanaka? (b) Tingadzidzei panyaya yaAporo? (Ona bhokisi rakanzi “Zvaunodzidzisa Zvinoenderana Nenguva Here?”)
10 Aporo aiva muKristu wechiJudha “ainyatsoziva Magwaro” uye ‘aipisa nomudzimu.’ Bhuku raMabasa rinoti nezvake: “Akatanga kutaura nokudzidzisa nenzira yakarurama zvinhu zvine chokuita naJesu, asi aingoziva rubhabhatidzo rwaJohani chete.” Aporo aisaziva kuti zvaaidzidzisa zvainge zvisisiri kushanda panyaya yorubhabhatidzo. Vamwe vaKristu, Prisira naAkwira pavakamunzwa achidzidzisa muEfeso, “vakamutsanangurira nzira yaMwari zvakanyatsorurama.” (Mab. 18:24-26) Izvi zvakabatsira sei Aporo?
11 Pashure pokuparidzira muEfeso, Aporo akaenda kuAkaya. “Paakasvika ikoko, akabatsira kwazvo vaya vakanga vatenda nokuda kwomutsa usina kukodzera kuwanwa waMwari; nokuti nesimba akaratidza kwazvo vaJudha pachena kuti vakanga vasina kururama, asi achiratidza neMagwaro kuti Jesu ndiye aiva Kristu.” (Mab. 18:27, 28) Panguva iyoyo, Aporo ainge ava kukwanisa kutsanangura zvakarurama zvairehwa norubhabhatidzo rwechiKristu. Ava kunzwisisa zvakadaro, “akabatsira kwazvo” vatsva kufambira mberi pakunamata. Tingadzidzei panyaya iyi? Tinofanira kuedza kunzwisisa zvatinoverenga muBhaibheri sezvakaita Aporo. Zvisinei, muKristu ane ruzivo paanotipa mazano okuti tingawedzera sei unyanzvi pakudzidzisa, tinofanira kubvuma rubatsiro rwacho tichizvininipisa uye tichiratidza kuonga. Kana tikadaro, basa redu dzvene richawedzera kunaka.
SHANDISA ZVAUNODZIDZA KUBATSIRA VAMWE
12, 13. Taura muenzaniso unoratidza kuti kushandisa Magwaro nokungwarira kunogona kubatsira vadzidzi veBhaibheri kufambira mberi.
12 Tinogona kuita kuti vamwe vakomborerwe kana tikatevedzera Prisira, Akwira uye Aporo. Paunokurudzira munhu anofarira kuti akunde chimwe chinhu chiri kumutadzisa kufambira mberi pakunamata, unonzwa sei? Kana uri mukuru, unonzwa sei hama yako ikakutenda kuti wakaibatsira nezano rinobva muMagwaro panguva yakaoma? Hapana mubvunzo kuti kushandisa Shoko raMwari kubatsira vamwe kunatsiridza upenyu hwavo kunoita kuti ugutsikane uye ufare. * Ona kuti ungaita sei izvozvo.
13 Panyaya yokunamata kwechokwadi nekwenhema, vaIsraeri vakawanda vepanguva yaEriya vaiva nemwoyo miviri. Zano raEriya raakapa vanhu ivavo rinogona kubatsira mudzidzi weBhaibheri asiri kufambira mberi pakunamata nemhosva yokuomerwa nokusarudza zvokuita. (Verenga 1 Madzimambo 18:21.) Funga nezvemamwe mamiriro ezvinhu: Kana munhu anofarira achitya zvingaitwa neshamwari nevemumhuri, unogona kumubatsira kutsunga kunamata Jehovha nokukurukura naye Isaya 51:12, 13.—Verenga.
14. Chii chichakubatsira kuyeuka ndima dzeBhaibheri paunenge uchidzida kuti ubatsire vamwe?
14 Chokwadi Bhaibheri rine mashoko akawanda anogona kukurudzira, kururamisa, kana kuti kusimbisa vanhu vanoriverenga. Asi ungabvunza kuti, ‘Ndingaita sei kuti ndiyeuke magwaro pandinenge ndichiada?’ Verenga Bhaibheri uye fungisisa pfungwa dzaMwari zuva nezuva. Izvi zvichaita kuti uve nemashoko aunozobatsirwa nemudzimu waJehovha kuyeuka paunenge wava kuada.—Mako 13:11; verenga Johani 14:26. *
15. Chii chichakubatsira kunyatsonzwisisa Shoko raMwari?
15 Paunenge uchiita mabasa ako echiKristu, nyengeterera uchenjeri kuna Jehovha sezvakaitwa naMambo Soromoni. (2 Mak. 1:7-10) “Bvunzisisa nokunyatsoongorora” Shoko raMwari kuti uwane zivo yakarurama yaJehovha uye kuda kwake sezvakaitwa nevaprofita vekare. (1 Pet. 1:10-12) Muapostora Pauro akakurudzira Timoti kuti adzidze “mashoko okutenda needzidziso yakanaka.” (1 Tim. 4:6) Ukaita izvozvo, uchanyatsokwanisa kubatsira vamwe pakunamata. Uye uchange uchisimbisawo kutenda kwako.
TINONYATSODZIVIRIRWA NESHOKO RAMWARI
16. (a) Ku“nyatsoongorora Magwaro zuva nezuva” kwakabatsira sei vaBheriya? (b) Nei kuverenga Bhaibheri zuva nezuva kuchikosha chaizvo kwatiri mazuva ano?
16 VaJudha vaiva muBheriya, guta reMakedhoniya, vaiva netsika yoku“nyatsoongorora Magwaro zuva nezuva.” Pauro paaiparidzira vaJudha ivavo mashoko akanaka, vaienzanisa mashoko ake nezvavaiziva zvaiva muMagwaro. Zvakaguma nei? Vakawanda vakaona kuti aidzidzisa chokwadi, uye “vakava vatendi.” (Mab. 17:10-12) Izvi zvinoratidza kuti kuverenga Bhaibheri zuva nezuva kunosimbisa kutenda muna Jehovha. Kutenda kwakadaro, “kutarisira nechivimbo zvinhu zvinenge zvichitarisirwa,” kunokosha kana tichizopona topinda munyika itsva yaMwari.—VaH. 11:1.
17, 18. (a) Kutenda kwakasimba uye rudo zvinodzivirira sei mwoyo wokufananidzira wemuKristu? (b) Tariro inotidzivirira sei?
17 Pauro aiva nechikonzero chakanaka paakanyora kuti: “Kana tiri isu vemasikati, ngatisvinurei tipfeke chinhu chinovhariridza chipfuva, chokutenda uye rudo uye tariro yoruponeso sengowani.” (1 VaT. 5:8) Mwoyo wemusoja unofanira kudzivirirwa pamuvengi. Saka mwoyo wokufananidzira wemuKristu unofanirawo kudzivirirwa pasimba rechivi. Chii chinoitika kana mushumiri waJehovha akanyatsovimba nezvipikirwa zvaMwari, akamuda uye akadawo vanhu? Mushumiri akadaro anenge achiita sokuti ari kuzvidzivirira nechinovhariridza chipfuva chemhando yepamusoro uye kashoma kuti azoite chero chinoita kuti asafarirwa naMwari.
18 Pauro akataurawo nezvengowani, “tariro yoruponeso.” Musoja anotaurwa nezvake muBhaibheri paaisadzivirira musoro wake, aigona kuurayiwa zviri nyore muhondo. Asi paaipfeka ngowani yakasimba, aigona kutemwa hake mumusoro asi osanyanya kukuvara. Kana tikadzidza Shoko raJehovha, tinova netariro yokuti anogona kutiponesa. Tariro yakasimba inoita kuti tisatsauswa nevakapandukira sangano uye ‘kutaura kwavo kusina zvakunobatsira’ kunoita seronda riri kunyenga. (2 Tim. 2:16-19) Tariro yedu ichatisimbisawo kuti tisafurirwa nevaya vangaita kuti tiite zvinonzi naJehovha zvakaipa.
CHINONYANYA KUKOSHA KUTI TIPONE
19, 20. Nei tichikoshesa chaizvo Shoko raMwari, uye tinoratidza sei kuti tinorikoshesa? (Ona bhokisi rakanzi “Jehovha Anondipa Chaizvo Zvandinoda.”)
19 Kuvimba neShoko raJehovha kunonyanya kudiwa sezvo mugumo unoswedera pedyo. Mazano atinowana mariri anotibatsira kugadzirisa tsika dzakaipa uye kuzvidzora pakutadza. Rinotikurudzira uye rinotinyaradza zvokuti tichakunda miedzo yaSatani neyenyika yake. Kutitungamirira kunoita Jehovha achishandisa Shoko rake kuchatibatsira kuramba tiri mumugwagwa wokuupenyu.
20 Yeuka kuti Mwari “anoda kuti vanhu vemarudzi ose vaponeswe.” “Vanhu vemarudzi ose” ivavo vanosanganisira vashumiri vaJehovha. Vamwe vacho ndevaya vatingabatsira nebasa redu rokuparidza uye rokudzidzisa. Asi vose vanoda kupona vanofanira kuwana “zivo yakarurama pamusoro pechokwadi.” (1 Tim. 2:4) Saka kuti tipone mumazuva okupedzisira tinotofanira kuverenga uye kushandisa mirayiridzo yakafemerwa iri muBhaibheri. Chokwadi, kuverenga kwatinoita Bhaibheri zuva nezuva kunoratidza kuti tinonyatsokoshesa Shoko raJehovha rechokwadi.—Joh. 17:17.
^ ndima 12 Chokwadi hatidi kushandisa zano reBhaibheri kumanikidza vamwe kuita zvimwe zvinhu kana kuti kuvapa mhosva. Tinofanira kuitira mudzidzi weBhaibheri mwoyo murefu uye mutsa sezvatinoitirwawo naJehovha.—Pis. 103:8.
^ ndima 14 Zvakadini kana uchiyeuka mashoko anokosha endima yacho asi wakanganwa bhuku racho, chitsauko, uye ndima? Ungangowana rugwaro rwacho nokutsvaka mashoko iwayo muindekisi iri kumucheto kweBhaibheri, muWatchtower Library, kana kuti mukonikodhenzi yeNew World Translation.
ZVAUNODZIDZISA ZVINOENDERANA NENGUVA HERE?
Aporo akabatsirwa kuti anyatsobudirira muushumiri hwake
Hatidi kusaririra pakunzwisisa chokwadi cheBhaibheri kuitira kuti tiudzewo vamwe zivo yakarurama. Uchifunga izvozvo, ungapindura sei mibvunzo inotevera?
Jesu aifunga nezvavanaani paakataura nezve“chizvarwa chino” pana Mateu 24:34?—Nharireyomurindi, April 15, 2010, mapeji 10-11.
Kuparadzaniswa kwe“makwai nembudzi” kunotaurwa pana Mateu 25:32 kunoitika rini?—Nharireyomurindi, October 15, 1995, mapeji 21-23.
Sezvinotaurwa pana Ruka 21:26, vanhu vachapera “simba nokutya uye nokutarisira zvinhu zvinouya pamusoro penyika inogarwa” rini?—Nharireyomurindi, February 15, 1994, mapeji 19-20.
Kana tikaverenga Bhaibheri zuva nezuva uye tichinyatsodzidza tiri toga, tichakwanisa kubatsira vamwe kufamba muchiedza chiri kuramba chichiwedzera icho Jehovha ari kuita kuti chipenye paShoko rake Bhaibheri.—Zvir. 4:18.
‘JEHOVHA ANONDIPA CHAIZVO ZVANDINODA’
Imwe hanzvadzi yechiduku yakanyora kuti: “Pazviyeuchidzo zvose zvatinopiwa naJehovha zvinoratidza kuti anotida, zviya zvinotikurudzira kuverenga Bhaibheri zuva nezuva zvakandibatsira chaizvo muupenyu hwangu. Ndakatanga kuverenga Bhaibheri mugore rangu rokupedzisira rokusekondari, uye zvakatora makore maviri kuti ndiripedze. Munguva iyoyo, ndakawana muShoko raJehovha zvose zvandaida pakusarudza zvokuita noupenyu hwangu. Iye zvino ndiri kuverenga Bhaibheri kechipiri. Asi zvinoita sokuti ndiri kuverenga zvinhu zvandisina kumbobvira ndaona. Kuverenga Bhaibheri iye zvino kuri kundinakidza chaizvo sepakutanga, ndingatoti kwawedzera! Ndinoshamiswa nokukwanisa kwaJehovha kundipa chaizvo zvandinoda.”